Wafdi hordhac u ah Madaxweyne farmajo oo gaaray Magaalada Garowe. – Kismaayo24 News Agency
Wafdi hordhac u ah Madaxweyne farmajo oo gaaray Magaalada Garowe.
by admin 2nd May 2019 021
Wafdi horudhac u ah Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garowe, halkaasoo lagu wado in maalinta Sabtida uu ka furmo Shir Wadatashi ah oo u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Sida wararku sheegayaan wafuuda gaaray Garowe ayaa waxay isugu jireen howlwadeenada iyo Saraakiil ciidan oo ka tirsan xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, kuwaasoo u gogol xaaraya socdaalka Madaxda ku tagayaan Garowe.
Shirka Wadatashiga ee ka furmaya Garowe ayaa u dhacay maalinta Sabtida oo taariikhdu ku beegan tahay 4 May, iyadoo Madaxda dowladda Federaalka iyo Madaxda Maamul goboleedyada ay Garowe tagi doonaan maanta illaa berri, si shirka Sabtida u furmo.
DEGDEG: Ciidamo gadoodsan oo lawareegay Bangiga dhexe ee
Ciidamada Mareykanka oo shaaciyey in ay dileen.
Dhagayso:- Xildhibaan Dalxa &amp;quot; Xasan Sheekh isaga u Sareeya Dalka Wana Kala Diri Karaa Golaha Adeega Garsoorka &amp;quot;
Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa soo gaaraya gobolka grdo
admin 29th October 2017